Kedụ ka ọ na-adị m mgbe mgbochi ọgwụ mgbochi Moderna nke abụọ m gbagburu taa?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Kedụ ka ọ na-adị m mgbe mgbochi ọgwụ mgbochi Moderna nke abụọ m gbagburu taa?
Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Safety • Technology • Tourism • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
7800689 1612415949028 8344e831af0f9
Onye Ọkachamara Nchekwa Njem Nleta natara ọgwụ mgbochi nke abụọ nke Moderna ma na-akọkwa akụkọ ya.
Dr. Peter Tarlow bụ onye ama ama ama ama ama na njem na njem njegharị na nchekwa
Dr. Tarlow natara agba mbụ ya nke Moderna izu atọ gara aga na-enweghị nsogbu
Taa ka Dr. Tarlow natara ogbugba nke abụọ ya. Ọ ga-akwado ndị ọzọ ka ha soro ụzọ ya wee gbaa ọgwụ mgbochi. Olee mmetụta ọ na - enwe - na olee otu o si gaa? Gee ntị n'ịgba akaebe ya.
Dr. Peter Tarlow bụ ngalaba-nchoputa nke Network Njem Nleta Ụwa, ọ na-eduga Njem Nleta Dị Mma, ngalaba nke Travel News Group.
Ruo afọ iri atọ Dr. Tarlow kpọtụrụ ndị na-ahụ maka njem nleta na mba ụwa. O nyeere ndị otu nnukwu ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ aka na nchekwa na ọrụ nchekwa na ọzụzụ. Ọ zụkwara ngalaba ndị uwe ojii na nlezianya njem nleta na ọ bụ Chaplin maka ọdụ ndị kọleji, Texas ndị uwe ojii.
Dị ka onye ndụmọdụ mmụọ na ọnọdụ nsogbu, ọ bụ otu n'ime ndị mbụ na Texas iji nweta Moderna COVID-19 gbara izu atọ gara aga. Mgbapu ọgwụ mgbochi ahụ na-aga na-enweghị nsogbu, ma taa Dr. Tarlow gbara 90 kilomita iji nweta agba ikpeazụ ya na nke abụọ.
Tupu ọ gawa, Peter gwara ọtụtụ ndị ọzọ okwu ma mụta banyere ahụmịhe ha. Ọ dị njikere maka mmetụta ndị ọzọ, nke ahụ nwere ike ịgụnye
Olee otú ọ na-adị n'ezie? Dr. Tarlow na-echegbu onwe ya banyere ịkwọ ụgbọala n'ụlọ mgbe usoro ahụ gasịrị wee kpọrọ nwunye ya, ọ bụrụ na.
Akaebe ya ga-enyekwu ozi maka ndị na-achọghị ikpebi ọgwụ mgbochi.
Dr. Tarlow ọ ga-akwado ndị ọzọ ka ha soro nzọụkwụ ya wee nweta mgbatị a na-azọpụta ndụ? Ọ ga-agwa gị nke taa eTurboNews nwelite. Gee vidiyo ahụ.